Halloween ee Talyaaniga | Safarka Absolut
Laba ka mid ah taariikhaha ugu muhiimsan ee lagu muujiyey jadwalka taariikhda Talyaaniga waa All Saints Day (sidoo kale loo yaqaan Tutti i Santi) oo la xuso 1da Nofeembar iyo Maalinta Dhimashada (Il Giorno dei Morti), oo dhacda Nofeembar 2deeda. Kuwani waa laba xafladood oo diin iyo dhaqan qoys ah oo xubnahoodu ku kulmaan si loo xusuusto kuwa aan hadda ku sii jirin. iyo in la sharfo kuwa Ilaah quduus ka dhigay.
Labada xafladoodba waxaa looga dabaaldegaa dalal leh dhaqan Kirishtaan ah laakiin siyaabo kala duwan. Waddamada Anglo-Saxon waxaa loo dabaaldegaa Halloween halka waddamada dhaxalka Katooliga laga xuso Maalinta All Saints iyo All Souls 'Day. Qormada soo socota waxaan ku dulmari doonaa su’aashan iyo sida Halloween looga xuso Talyaaniga.
1 Sidee loogu dabaaldegaa Maalinta All Saints ee Talyaaniga?
2 Sidee loogu dabaaldegaa Maalinta Nafta oo dhan Talyaaniga?
3 Iyo gobolada Talyaaniga qaarkood?
4 Waa maxay Halloween?
4.1 Sidee maanta loo xusaa Halloween?
4.2 Ma taqaan dhagarta ama daaweynta Halloween?
5 Iyo sidee Halloween loogu dabaaldegaa Talyaaniga?
Sidee loogu dabaaldegaa Maalinta All Saints ee Talyaaniga?
Maalinta Tutti i Santi waa ciid ka duwan maalinta Il Giorno dei Morti. Bishii Nofeembar 1, dhammaan kuwa barakaysan ama quduusiinta ee iimaankooda ku noolaa si gaar ah ama u dhintay waxaa loo xusaa si gaar ah oo markay dhaafeen purgatory, ay isdaahiriyeen oo ay haddaba ku nool yihiin boqortooyada jannada iyadoo ay joogaan Ilaah.
Waa wax iska caadi ah Talyaaniga iyo wadamada kale ee leh dhaqanka Katooliga in loo dabaaldego maalintan iyada oo lagu soo bandhigayo waxyaalaha qadiimiga ah ee quduusiinta kiniisadaha waaweyn iyo kaniisadaha waaweyn.
Sidee loogu dabaaldegaa Maalinta Nafta oo dhan Talyaaniga?
Waa ciid qaran. Aroortii maalintaas ayaa loo baahan yahay marxuumka kaniisadaha dhexdooda maalinta inteeda kalena, Talyaanigu wuxuu ka qaybgalaa xabaalaha si ay ubaxyo u keenaan kaas oo ay ku sharfayaan qaraabadooda dhimatay, gaar ahaan jaangooyooyinka, ayna ilaaliyaan qabuuraha kuwii ay jeclaayeen. Maalintani waxay dhacdaa Nofeembar 2 ujeedkeeduna waa in loo duceeyo kuwa dhintay si loo xusuusto xusuustooda loona weydiiyo in Ilaahay ku soo dhoweeyo dhiniciisa.
Dhinaca kale, Reer Talyaani badanaa waxay karsadaan keeg dhaqameed u eg qaab digir oo loo yaqaan "ossa dei morti" in kasta oo sidoo kale badanaa loo yaqaan "keegga meydadka." Wuxuu had iyo jeer joogaa kulamada qoyska inta lagu jiro maalmahan maxaa yeelay waxaa la rumeysan yahay in qofka dhintay uu maalintaas ku soo laabto si uu uga qeyb galo xafladda.
Qoysaska dhaqankoodu badan yahay waxay diyaariyaan miiska waxayna aadaan kaniisada si ay ugu duceeyaan kuwa tagay. Albaabada ayaa loo daayay si naftu guriga u soo gasho oo qofna ma taabto cuntada ilaa qoysku ka soo laabto kaniisada.
Iyo gobolada Talyaaniga qaarkood?
Sicilia: Inta lagu jiro habeenka All Saints ee gobolkan waxaa la rumeysan yahay in qofka reerka ka dhintey uu doonayo inuu hadiyado uga tago kuwa yaryar oo ay weheliso miraha Martorana iyo macmacaan kale.
Massa Carrara: Gobolkan, raashinka ayaa loo qaybiyaa dadka baahan waxaana la siiyaa hal koob oo khamri ah. Carruurtu waxay inta badan sameeyaan silsilad ka samaysan xabbo iyo tufaax la kariyey.
Mount Argentario: Aaggan dhaqanku wuxuu ahaa in kabaha la dul dhigo qabuuraha marxuumka maxaa yeelay waxaa loo haystay in habeenka Nofeembar 2 ay naftoodu ku laabanayso dunida kuwa nool.
Jaaliyadaha koonfurta talyaaniga maamuus ayaa loo bixiyaa marxuumka iyadoo loo eegayo dhaqanka bari ee dhaqanka Griiga-Byzantine xafladuna waxay dhacdaa toddobaadyo ka hor bilowga Lent.
Sidii aan ku sheegay safafkii hore, Halloween waxaa looga dabaaldegaa waddamada dhaqanka Anglo-Saxon. Dabaaldeggaani wuxuu xididdadiisa ku leeyahay xaflad Celtic qadiimi ah oo la yiraahdo Samhain, taas oo dhacday dhammaadkii xagaaga markii xilligii goosashada dhammaaday oo sannadka cusubi uu ku soo beegmay xilligii dayrta.
Waqtigaas Waxaa la rumeysnaa in ruuxyada dadka dhintay ay dhex socdeen kuwa nool habeenkii Halloween, Oktoobar 31st. Sababtaas awgeed waxay caado u ahayd in la sameeyo cibaado gaar ah oo lagula xiriiro qofka dhintay lana shido shumac si ay jidka adduunka kale u raadiyaan.
Maanta, xafladda Halloween waxay aad uga duwan tahay asalka. Xaqiiqdii waxaad ku aragtay marar aan tiro lahayn filimada! Hadda macnaha aan caadiga ahayn ee Halloween ayaa dhinac loo dhigay fursad u si dabbaaldeg dabeecad ciyaar leh, halkaas oo ujeedada ugu weyn ay tahay in lagu raaxeysto saaxiibada.
Sidee maanta loo xusaa Halloween?
Dadka badankood waxay u labistaan ​​xafladaha guryaha ama la aadaan saaxiibadood goobaha caweyska si ay ugu baashaalaan dhacdooyinka mawduucyada ku saabsan. Dareenkan, baararka, makhaayadaha, discos iyo noocyada kale ee dukaamada waxay ku dadaalaan inay qurxiyaan dhammaan xarumaha iyagoo leh mowduuca caadiga ah ee xafladda.
Astaanta qurxinta ee dhaqankan ayaa ah Jack-O'-Lantern, bocor lagu xardhay wejigeeda banaanka iyadoo wajiyo murugo leh oo gudaha gudihiisa la faaruqiyay si shumac gudaha loogu dhigo loona iftiimiyo. Natiijadu waa mid cabsi badan! Si kastaba ha noqotee, astaamaha kale ee qurxinta sida qashinka, qalfoofka, fiidmeerta, saaxiradda, iwm ayaa sidoo kale la adeegsadaa.
Ma taqaan dhagarta ama daaweynta Halloween?
Carruurtu sidoo kale runtii way ku raaxaystaan ​​Halloween. Sida dadka waaweyn, Waxay u labistaan ​​inay ku wareegaan guryaha xaafaddooda iyagoo koox ah oo weydiisanaya deriskooda inay siiyaan xoogaa macmacaan ah iyada oo loo marayo "khiyaanada ama daweynta" caanka ah. Laakiin maxay ka kooban tahay?
Aad u fudud! Markay garaacayaan albaabka deriskaaga Halloween, carruurtu waxay soo jeedinayaan inay aqbalaan khiyaano ama ay heshiis la galaan. Haddii uu doorto daaweyn, carruurtu waxay helayaan nacnac laakiin haddii derisku doorto daaweyn, markaa carruurtu waxay sameeyaan kaftan yar ama kaftan ah iyaga oo aan siinayn macmacaan.
Iyo sidee Halloween loogu dabaaldegaa Talyaaniga?
In kasta oo ay ahayd xaflad asal ahaan ka soo jeeda Anglo-Saxon, haddana aad bay ugu faaftay waddanka Talyaaniga oo waxaa lagu xusaa gaar ahaan dadka waaweyn, oo aan aad ugu badnayn carruurta, sidaa darteed waa wax aad u fiican in la arko iyagoo ku samaynaya "khiyaamada ama daweynta" guriga.
Inta badan reer Talyaani waxay u labistaan ​​inay aadaan xafladaha naadiyada ama guryaha si ay ugu raaxaystaan ​​waqti fiican oo ay weheliyaan asxaabtaada, iyagoo cabbaya xoogaa yar oo qoob-ka-ciyaaraya ilaa waaberiga.
Dukaamada Talyaaniga sidoo kale waxaa lagu qurxiyaa astaamaha hidaha iyo dhaqanka qurxinta ee Halloween sida bocorka, wuxuushyada, cobwebs, fiidmeerta, saaxiradda ama cirfiidka, iyo kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Halloween ee Talyaaniga